दुई वर्षदेखि नविकरण नगरी बसेको संस्थाले आयोजना गरेको महोत्सवको मुख्य मन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गर्ने - Purbeli News
दुई वर्षदेखि नविकरण नगरी बसेको संस्थाले आयोजना गरेको महोत्सवको मुख्य मन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गर्ने
महोत्सवको चौतर्फी विरोध
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण १४, २०७४ समय: ९:१२:१२
उदयपुर, फागुन १४ / त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघ गाईघाटले विगत दुई वर्षदेखि नविकरण नगरी बसेको संस्थाले आयोजना गरेको महोत्सवको प्रदेश नं. १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ र ०७४÷०७५ को नविकरण नगरी बसेका त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघले लगाउने मेलाको उद्घाटनको प्रमुख अतिथि तथा प्रदेश नं. १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले गर्ने भएको छ ।
नविकरण नगरी बसेका संस्थालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले अनुमति फागुन १३ गते दिएपछि मुख्य मन्त्री राईले उद्घाटन गर्ने पक्का भएको छ । त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघ भित्रै आर्थिक हिनामिना गरेको स्वरहरु गुन्जिरहेको अवस्थामा नविकरण गर्न बाँकी रहेका बेला सिडियो कार्यालयले फागुन १५ देखि २५ गतेसम्म हुने पहिलो प्रदेश महोत्सव त्रियुगा–२०७४ को संचालनको अनुमति अन्तिम समयमा दिईएको छ ।
त्रिउवा संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमा २०७२ चैत्र २ गते आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ र २०७२÷०७३ को एकै साथ नविकरण गरेपनि त्यसपछि कुनै नविकरण गरेको छैन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ सम्मको मात्रै लेखा परीक्षण भएको देखिन्छ भने सोपछिका लेखा परीक्षण नभएको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संघलाई नविकरण नगरेसम्म अनुमति नदिने सर्तमा रोकेपनि राजनीतिकको दवावका कारण महोत्सव संचालन अनुमति दिएको प्रशासन स्रोतले बताएको छ ।
यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरका शाखा अधिकृत तथा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार खड्कासंग सम्पर्क गर्दा संस्था नविकरण नगरेको देखियो तर, अन्तिम समयमा प्रमुख अतिथिको रुपमा प्रदेश नं. १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राई आउने भएपछि महोत्सव संचालनको लागि बाटो मात्रै खोलेको बताए । उनका अनुसार महोत्सव सकिएको ७ दिनभित्र आय, व्याय सार्वजनिक एवम् प्रतिवेदन पेश गर्ने सर्तमा बाटो खोलिदिएको बताए ।
त्रियुगा नगरपालिकाका प्रशासकिय प्रमुख तारानाथ लुइटेलका अनुसार पहिलो प्रदेश महोत्सव त्रियुगा २०७४ को बारेमा यस कार्यालयसंग कुनै समन्वय नभएको जानकारी गराएका छन् ।
त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघले लगाउन खोजेको महोत्सवको चौतर्फी विरोधहरु हुन थालेका छन् । शैक्षिक संघ संस्था, विद्यार्थी संघ संगठन, उद्योगी, व्यवसायीले समेत विरोधमा उत्रिएका छन् । विद्यार्थीहरुको एसइइ परीक्षा र वार्षिक परीक्षाको मुखैमा महोत्सव हुने भएकोले शैक्षिक संघ संस्था, विद्यार्थी संगठन र अभिभाव संघले विरोध जनाएका छन् ।
शैक्षिक संघ संस्थाले पहिलो प्रदेश महोत्सव त्रियुगा–२०७४ लाई एसइइ परीक्षा सकिएपछि गर्न अनुरोध गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार चैत्र २० गतेपछि मेला महोत्सव गर्दा सवैमा नयाँ वर्षको उमङ्ग पनि भएकोले यस महोत्सवले सार्थकता पाउने नेपाल शिक्षक महासंघका सचिव काशीराज कार्कीले बताए । ‘एसइइ परीक्षाको मुखैमा महोत्सव गर्दा विद्यार्थीको पढाईमा ध्यान नजाने, नतिजा कमजोर हुने भएमा विद्यार्थी, अभिभाव, र शिक्षकको १० वर्षको मेहनत तथा लगानी खेर जान्छ । मेला लगाउनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन, मेला लगाउँदा सवै थोकलाई ख्याल गरेर लगाउनु पर्छ । उनले भने– ‘कि मंसिरको अन्त्य वा माघको पहिला साता गर्नू पर्थ्यो, लगाउने नै भए चैत्र २० पछि मात्रै लगाउनु सुझाव दिन्छु ।’
यस्तै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष दिलबहादुर फुयालका अनुसार परीक्षाको मुखैमा महोत्सव गर्दा नाच गान र ध्वनी प्रदुशनले गर्दा विद्यार्थीको मानसिकतामा नराम्रो असर पार्ने भएकोले परीक्षा पछि गर्नु पर्ने बताए । मेला महोत्सवमा ज्योति मगर र सरस्वती लामा जस्ताको अश्लिल प्रर्दशनले विद्यार्थीमा नकरात्मक असर पर्ने भएकाले यसलाई परीक्षा पछि गर्न सुझाव दिन चाहान्छु । अखिल क्रान्तिकारी बिद्यार्थी युनियनका केन्द्रिय सदस्य भरत घिमिरे र अनेरास्ववियुका विद्यार्थी नेता हेम खड्काले पनि परीक्षाको मुखैमा हुन लागेको मेला प्रती गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
स्थानीय व्यवासयी समेत असन्तुष्ट
त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघले लगाउन खोजेको पहिलो प्रदेश महोत्सव त्रियुगा–२०७४ को स्थानीय व्यवसायीहरु पनि विरोधमा उत्रिएका छन् । गाईघाटमा बिगत लामो समयदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका हिमाल राईले स्थानीय वस्तु तथा सामग्रीको व्यापारमा उद्योग बाणिज्यसँगले ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार मेलामा ‘बाहिरबाट ल्याएका पुराना र कम्सल समानहरु सस्तोमा बेचिने हुनाले स्थानीय व्यापारीका समान बेच्नै कठिन हुने गरेको छ । ’ उनका अनुसार गाईघाटका अधिकांश ब्यापारी मेला प्रति रुस्ट बनेका छन ।
उनका अनुसार महोत्सवको आम्दामी कसरी खर्च गरियो भनेर पारदर्शी तरिकाले हिसाब समेत सार्वजनिक गर्ने प्रचलन नभएको भन्दै आयोजकले बर्षेनी लाखौ रकम हिनामिना गर्ने गरेको र अघिल्लो बर्षपनि लाखौं रकम हिनामिना गरेको बताए खास गरी मेलाले जिल्लाभित्रको उत्पादन र पहिचानलाई बजारीकरण गरी साना तथा घरेलु उघोगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता मेलाको आयोजना गर्नु पर्नेमा काठमाडौंको रत्नपार्कमा राखेका सामानहरु बेच्नेलाई महोत्सवमा स्थान दिने गरेको उनले गुनासो गरेका छन् । आयोजकले साना तथा स्थानीय उद्यमीको नाम बेचेर लाखौ रकम कुम्ल्याउने गरेको बताए ।
स्रोतका अनुसार चौथो पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय महोत्सव–२०७३ त्रियुगाको आम्दानी करिव २६ लाख ५० हजार मध्ये ९ लाख रकम हिनामिना भएको छ । उनका अनुसार स्टल निर्माणको खर्च बाहेक सवै स्टल ठेक्का लिने व्यक्तिले लिएकोले चोखो करिव १६ लाख भन्दाबढी आम्दानी हुनुपर्नेमा अहिले एक रुपैया पनि खातामा नभएको बताए । उनले भने–‘खर्च कटाएर १६ लाख भन्दा बढी आम्दानी हुँदा हुँदै पनि अध्यक्ष भगतले ९ लाख मात्रै आम्दानी भयो भनेका थिए । सोही अनुसार हामीले स्वीकार गर्यौ तर अहिले एक रुपैया पनि खातामा छैन् । सवै पैसा हिनामिना भएको छ, हिसाव पनि छैन, संस्था नविकरण गरेको पनि छैन ।
लेखा परीक्षण गराउँदा करिव ९–१० लाख रुपैया भन्दा बढी अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार भगतको नाउँमा बेरुजु देखिने भएकोले आफु अनुकुल लेखा परीक्षण गराउन चाहेको थिए । तर, संस्थाले तोकेको अडिटर बाहेक तेस्रो पक्षसंग अडिट गर्न खोजेपछि संस्थाका कार्यसमितिमा विरोधका कारण अडिट हुन नसकेको स्रोतले बताए । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष भगतले विल भपाई लिएर जानुभयो तर, पछि विल भपाई मुसाले खायो भन्दै विल भर्पाई खोजीमा लाग्नु भएको छ, अहिलेसम्म अडिट भएको छैन् । लेखा परीक्षण भएमा उहाँले करिव ९–१० लाख भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको छ ।
उदयपुरमा करेन्ट लागेर ७ वर्षिय बालकको मृत्यु
राजातन्त्र फर्किदैन् : नेता केसी